All Pre-K–12 Students to Move to Remote Learning Jan. 10-14 | Battle Creek Public Schools
In response to the continued community spread of COVID-19 in Calhoun County, we have made the difficult decision to move all grade levels to remote instruction starting on Monday, January 10. Our current plan is for students to return to in-person instruction on Tuesday, January 18, following MLK Day. We will continue to work closely with public health officials to ensure that it is safe to do so on that date and will keep you updated if that plan changes.
At BCPS, the health and safety of our students, families, and staff members is always our top priority. With rising COVID-19 case numbers as the Omicron variant spreads, we believe this is the only way we can protect the health and safety of our community, while ensuring students can continue learning. Please see below for more details:
Pre-K–5 students will engage in remote learning with live classes on Google Meet (not Zoom) in both the morning and afternoon, as well as have self-guided time for assignments with virtual support from teachers available throughout the day. Attendance will be taken in the morning and afternoon. Please stay tuned for more information from your school about their class schedule.
Grade 6-12 students will engage in remote learning using the same schedule they use in person via Google Meet (not Zoom). Attendance will be taken during each class period.
BCAMSC will also be remote from January 10-14.
CACC will continue with in person instruction. Stay tuned for more details on this from your student’s teacher.
Special education students, English Language Learners, and students with IEPs should stay tuned for more information from your student’s teacher.
Adult education will continue with in-person instruction.
There will be no school on Monday, January 17, and we plan for students to return to school on Tuesday, January 18.
Please note that all remote lessons will take place over Google Meet rather than Zoom. If you have any trouble accessing Google Meet, please contact your student’s teacher directly.
Athletics events and practices will continue as scheduled. Spectators at events will be limited to athletes’ parents or guardians only. At this time, no students will be permitted to attend.
Extracurriculars and before-/after-school activities should be held remotely, if feasible. Please stay tuned for more information from your school building.
All field trips will be canceled or postponed.
Food service will be available to all students and pickup available at all buildings twice per day Monday, January 10 through Thursday, January 13.
For elementary schools, meal pickups will be available at each building during the following windows of time:
For secondary schools, meal pickups will be available at each building during the following windows of time:
Any questions should be directed to Michelle Morrissey at mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us or (269) 965-9521.
For technology support, including Chromebook access, internet connectivity issues, online learning support, and more, please reach out to your student’s teacher who will connect you with available resources.
If you have any other questions or concerns, please reach out to us at (269) 965-9500. For Spanish language support, please call (269) 419-1978. For Burmese language support, please call (269) 601-6029.
We know that remote learning places significant burdens on students, families, and our staff members, but the impacts of widespread community cases make this step essential at this time. In partnership with all of our BCPS heroes and the surrounding community, we will do our best to provide as much additional support as possible to families during this difficult time. Please reach out to your student’s building with any questions or concerns.
Todos los estudiantes de Pre-K – 12 Pasarán al Aprendizaje Remoto del 10 al 14 de Enero
En respuestaala continua propagación comunitaria de COVID-19 en el condado de Calhoun, hemos tomado la difícil decisión de cambiar todos los niveles de grado escolarainstrucción remotaapartir del lunes 10 de enero. Nuestro plan actual es que los estudiantes regresenala instrucción en persona el Martes 18 de enero, después del Día de MLK. Continuaremos trabajando de cerca con los funcionarios de salud pública para garantizar que el regresoaclases en persona sea seguro en esa fecha y lo mantendremos informado si ese plan cambia.
Estén atentos para obtener más información por parte del director de su escuela con respectoalos horarios de educación remota, accesoatecnología y más. Si tiene alguna pregunta, diríjala al maestro de su estudiante.
En BCPS, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal es siempre nuestra máxima prioridad. Con el aumento del número de casos de COVID-19amedida que se propaga la variante de Omicron, creemos que esta es la única forma en que podemos proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad, al mismo tiempo que nos aseguramos de que los estudiantes puedan continuar aprendiendo. Por favor vea abajo para más detalles:
Los estudiantes de Pre-K–5 participarán en el aprendizaje remoto con clases en vivo en Google Meet (no Zoom) tanto por la mañana como por la tarde, y tendrán tiempo autoguiado para tareas con apoyo virtual de maestros disponible durante todo el día. Se tomará asistencia en la mañana y por la tarde. Estén atentos para obtener más información por parte de su escuela sobre su horario de clases.
Los estudiantes de los grados 6-12 participarán en el aprendizaje remoto utilizando el mismo horario que usan en personaatravés de Google Meet (no Zoom). Se tomará asistencia durante cada período de clase.
BCAMSC también será remoto del 10 al 14 de enero.
CACC continuará con la instrucción en persona. Estén atentos para obtener más detalles sobre esto por parte del maestro de su estudiante.
Los estudiantes de educación especial, los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes con un IEP deben estar atentos para obtener más información por parte del maestro de su estudiante.
El programa de educación para adultos continuará con la instrucción en persona.
No habrá clases el lunes 17 de enero y planeamos que los estudiantes regresenala escuela el martes 18 de enero.
Tenga en cuenta que todas las lecciones remotas se llevaránacabo en Google Meet en lugar de Zoom. Si tiene algún problema para accederaGoogle Meet, comuníquese directamente con el maestro de su estudiante.
Los eventos y prácticas de atletismo continuarán según lo programado. Los espectadores en los eventos se limitarán únicamentealos padres o tutores de los atletas. En este momento, ningún estudiante podrá asistir.
Las actividades extracurriculares y antes/después de la escuela deben realizarse de forma remota si es posible. Estén atentos para obtener más información por parte de la escuela de su estudiante.
Todas las excursiones serán canceladas o pospuestas.
El servicio de alimentos estará disponible para todos los estudiantes y la recogida de comidas estará disponible en todos los edificios dos veces al día del lunes 10 de enero al jueves 13 de enero.
Para las escuelas primarias, la recogida de comidas estará disponible en cada edificio durante los siguientes períodos de tiempo:
Para las escuelas secundarias, la recogida de comidas estará disponible en cada edificio durante los siguientes períodos de tiempo:
Cualquier pregunta debe dirigirseaMichelle Morrissey en mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us o (269) 965-9521.
Para apoyo tecnológico, incluido el accesoaun Chromebook, problemas de conectividadaInternet, apoyo de aprendizaje en línea y más, comuníquese con el maestro de su estudiante, quien lo conectará con los recursos disponibles.
Si tiene otras preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros al (269) 965-9500. Para obtener asistencia en español, llame al (269) 419-1978. Para obtener asistencia en birmano, llame al (269) 601-6029.
Sabemos que el aprendizaje remoto impone una carga significativa para los estudiantes, las familias y los miembros de nuestro personal, pero los impactos de los casos comunitarios generalizados hacen que este paso sea esencial en este momento. En asociación con todos nuestros héroes de BCPS y la comunidad circundante, haremos todo lo posible para brindar el mayor apoyo posiblealas familias durante este momento difícil. Comuníquese con el edificio escolar de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud.
Gracias y manténganse bien,
Superintendente Kimberly Carter
ဘရ်ကတ်ကျောင်းသားမိသားစုများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
Calhoun County ရှိလူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း COVID-19 ဆက်လက်ပျံ့နှံ့မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တနင်းလာ နေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အတန်းအားလုံးသင်ကြားခြင်းကို ရပ်ဝေး (remote) သင်ကြား ခြင်း ဖြင့် ရွှေ့ရန် ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ MLK နေ့၏ နောက်ရက် ဖြစ်သော အင်္ဂါနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက် နေ့တွင် လူကိုယ်တိုင် (in-person) သင်ကြားနည်းဖြင့် ပြန်လည်သင်ကြားပါမည်။ ဤအစီ အစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ဘေးကင်းကြောင်းသေချာစေရန် အစိုးရကျန်းမာရေးဌန (public health) နှင့်အနီးကပ်အတူလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အကယ်၍ အပြောင်းအလဲရှိပါက၊ နောက်ဆုံးရ (updated) သတင်းအချက်အလက်များ တင်ပြပေးသွားပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရပ်ဝေးသင်ကြားမည့် အချိန်ဇယား၊ နည်းပညာအသုံးပြုခွင့် နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စာသင်ကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှ နောက်ထပ်အချက်အလက်များရရှိအုံးမှာဖြစ်သောကြောင့် စောင့်မျော်ပေးပါ။ သင်သိလိုသော မေးခွန်းများရှိပါက သင့်ကျောင်းသား၏ ဆရာ/မများထံ၌လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
BCPS တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသားများ၊ မိသားစုများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြဲတမ်း ဦးစားပေးသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ With rising COVID-19 case numbers as the Omicron မျိုးရိုးဗီဇကွဲ ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက် တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်၊ ကျောင်းသားများကို ဆက်လက်ပညာသင်ယူစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုင်းအဝိုင်း၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အသေးစိတ် ကိုအောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။
ရပ်ဝေးမှသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ် (Remote Learning Plans)
မူကြို မှ ၅ တန်းကျောင်းသားများသည် ရပ်ဝေး/အွန်လိုင်း (remote) ဖြင့်သင်ကြားသောအခါ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို Google Meet အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါသည်။ (Zoom ကို အသုံးပြုမည် မဟုတ်ပါ။) နံနက်ပိုင်းနှင့် နေ့လည်ပိုင်း နှစ်ချိန်စလုံးတွင် အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် လုပ်ဆောင် ရမည့် အိမ်စာနှင့် သင်ခန်းစာများပြုလုပ်ရာတွင် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ဆရာ/မများမှ ကူညီမှု ပေးနိုင်မှာဖြစ် ပါသည်။ ကျောင်းခေါ်ချိန်ကို နံနက်ပိုင်း နှင့် ညနေပိုင်း နှစ်ကြိမ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမှ ပေးပို့မည့် အချိန်ဇယားနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စောင့်မျော်ပေးပါ။
၆-၁၂ တန်းကျောင်းသားများသည် ရပ်ဝေး/အွန်လိုင်း (remote) ဖြင့်သင်ကြားသောအခါ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို Google Meet အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါသည်။ (Zoom ကို အသုံးပြုမည် မဟုတ်ပါ။) အတန်းတစ်ခုစီအတွက် ကျောင်းခေါ်ချိန် ရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
BCAMSC ကျောင်းသည် ဇန္နဝါရီ ၁၀-၁၄ အတွင်း ရပ်ဝေး (remote) ဖြင့်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါသည်။
CACC ကျောင်းကတော့ လူကိုယ်တိုင် (in person) ဖြင့်ဆက်လက်သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ/မများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို စောင့်မျော်ပါ။
အထူးအကူအညီလိုအပ်သောကျောင်းသားများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားသောကျောင်းသားများ (English Language Learners) နှင့် တစ်ဦးချင်းအကူအညီပေးရန်လိုအပ်သောကျောင်းသားများ (IEPs) စသည့်ကျောင်းသားများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျောင်းသား၏ ဆရာများထံမှ စောင့်မျော်ပါ။
သက်ကြီးပညာရေး (Adult education) သည် လူကိုယ်တိုင် (in-person) ဖြင့်ဆက်လက်သင်ကြားပါမည်
တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက် သည် ကျောင်းပိတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂါနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများ ကျောင်းပြန်လည်တက်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ရပ်ဝေး (remote) သင်ကြားခြင်းအားလုံးကို Zoom အသုံး မပြုဘဲ၊ Google Meet ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါ သည်။ အကယ်၍ Google Meet ဝင်ရန် အခက်အခဲရှိပါက၊ ကျောင်းသား၏ ဆရာ/မထံ တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်ပေးပါ။
ပြင်ပသင်ရိုးညွှန်းတမ်းလှုပ်ရှားမှုများ (Extracurricular Activities)
အားကစား ပွဲစဉ်နှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်အားလုံး ပုံမှန်အချိန်ဇယားအတိုင်းပြုလုပ်ပါမည်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကို လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသည်။ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူကိုသာ လက်ခံမှာဖြစ် ပါသည်။ ယခုချိန်တွင် ကျောင်းသားများတက်ရောက်ခွင့် မရှိပါ။
ပြင်ပသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကျောင်းမတက်မီ/ကျောင်းတက်အပြီး ပညာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်များကို လည်း ဖြစ်နိုင်လျှင် ရပ်ဝေးသင်ကြားခြင်းဖြင့် သင်ကြားသွားပါမည်။ စာသင်ကျောင်းမှ ထုတ်ပြန်မည့် သတင်းများကို စောင့်မျော်ပါ။
လေ့လာရေးခရီးစဉ်များအားလုံးဖျက်သိမ်းသည် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ဆိုင်းသည်။
အစာဖြန့်ဝေခြင်း (Meal Distribution)
ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုကို တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်အထိ အဆောက်အအုံအားလုံးတွင် ၂ ကြိမ် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မူလတန်းကျောင်းသားများအတွက် အစာထုတ်ခြင်းကို စာသင်ကျောင်းတိုင်းတွင် အောက်ပါအချိန်အတွင်း တစ်ရက်တွင် နှစ်ကြိမ် သွားထုတ်နိုင်ပါသည်။
၆-၁၂ တန်း ကျောင်းသားများအတွက် အစာထုတ်ခြင်းကို စာသင်ကျောင်းတိုင်းတွင် အောက်ပါအချိန်အတွင်း တစ်ရက်တွင် နှစ်ကြိမ် သွားထုတ်နိုင်ပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသော မေးခွန်းများရှိပါက Michelle Morrissey mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us သို့မဟုတ် (269) 965-9521 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
နည်းပညာအကူအညီ (Technology Support)
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သော Chromebook ဝင်ရောက်မှု၊ အင်တာနက်ဆက်နွယ်မှု၊ အွန်လိုင်းသင်ကြားမှု စသည့် တို့အတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ ကျောင်းသား၏ ဆရာ//မထံသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။
အကယ်၍ သင်သိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များရှိပါက (269) 965-9500 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စပိန်ဘာသာစကားအတွက် (269) 419-1978 သို့၎င်း၊ မြန်မာဘာသာစကားအတွက် (269) 601-6029 သို့၎င်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ရပ်ဝေး (remote) သင်ကြားခြင်းသည် ကျောင်းသား၊ မိသားစုများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ကြီးမားသော ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သော်လည်း၊ လူထုအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ် သောအခြေအနေဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ BCPS သူရဲကျောင်းများနှင့် လူထုအသိုင်းဝိုင်းတို့ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ဤခက်ခဲသော အချိန်ကာလအတွင်း မိသားစုများအတွက် တတ်နိုင်သမျှ နောက်ထပ်ပံ့ပိုးမှုများပေးနိုင်ရန် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ သိလိုသောမေးခွန်း သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှု စသည့်တို့ရှိပါက၊ ကျောင်းသားတက်ရောက်သော စာသင်ကျောင်းသို့ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပညာရေးမှူး Kimberly Carter